Libukeka lifiphala ikusasa likaDyantyi ebholeni lombhoxo - Impempe
Libukeka lifiphala ikusasa likaDyantyi ebholeni lombhoxo
January 11, 2021 Impempe.com
SIZOMQOTHULA iphakethe isinqumo sokudlulisela phambili udaba lwakhe u-Aphiwe Dyantyi ophoxeke etholwa nesikhuthazi esingavumelekile ekubeni engumdlali osematheni emhlabeni wombhoxo.
Impempe.com ihoshe ukuthi lo mdlali wamaBhokobhoko ogcine ukuhola ezinyangeni ezingu-18, uludlulisela phambili elokugwetshwa yiSouth African Institutte for Drug-Free Sport (SAIDS), ngoba ekholwa ukuthi umsulwa.
NgoDisemba 14 iSAIDS, igaklaze uDyantyi ngeminyaka emine, engazihlanganisi nombhoxo neminye imidlalo, yangakufihla ukuthi unalo ilungelo lokuludlulisela phambili udaba lwakhe yize exwayiswe ngokuthi kuyaliqothula iphakethe ukwenza lokho.
Nemenenja yakhe uGert van der Merve ihlale isho ukuthi ngoba vele ayikho le nto agwetshelwa yona lo mdlali, bayazi ukuthi banayo imigudu abangayilandela kuze kube sekugcineni kuvele ukuthi kudlalwa ngaye umfana inkinga ukuthi kubiza kakhulu ukwenza lokho.
Nokho uDyantyi kuvelile ukuthi izinsuku ezingu-21 ayezinikiwe ukuthi alidlulisele phambili ukwenze lokhu zingakapheli.
Okuzolandela ukuthi kuhlangane amathimba abameli kubhekwe phambili.
Kubuhlungu-ke nokho ukuthi umdlali oqokwe koweWorld Rugby Breakthrough of the year ngo-2018 akayidlalanga iNdebe yoMhlaba ebise Japan ngo-2019 yanqotshwa izwe lakhe amaBhokobhoko.
Previous Previous post: UNcikazi uncoma ukuzimisela kwabadlali be-Arrows
Next Next post: Udlulile emhlabeni uBritish Bulldog owasimamisa iPSL